Sergio Ramos oo laga fasaxay xerada tababarka xulka qaranka Spain – Gool FM
(Spain) 16 Nof 2018. Tababaraha xulka qaranka Spain ee Luis Enrique ayaa ogolaaday inuu ka tago difaaca Sergio Ramos xerada tababarka ee La Roja, kadib guuldaradii 3-2 ahayd ee ka soo gaartay Croatia.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain, Sergio Ramos ayaa kaga dhaqaaqay xerada tababarka ee La Roja, sababa la xiriira inuu dareemay xanuun.
Ramos ayaan u ciyaari doonin xulkiisa Spain kulanka saaxiibtinimo soo aadan ay la ciyaarayaan Bosnia and Herzegovina, wuxuuna ku laaban doonaa kooxdiisa Real Madrid, si uu kaga soo kabto dhaawacan soo gaaray.
Hadii ay baaritaanada caafimaad ay muujiyaan in dhaawaca Ramos uu yahay mid aad u daran, Real Madrid ayaa gali doonta xaalad adag, sababa la xiriira tirade difaacyadeeda ee dhaawaca kaga maqan.
Xidigaha ilaa iyo haatan kooxda Real Madrid dhaawacyada kala duwan kaga maqan ayaa waxaa ka mid ah Nacho, Dani Carvajal, Marcelo iyo Jesús Vallejo.